Muchidzidzo ichi, isu tichaona yedu Vhidhiyo Chidzidzo chinonzi ChiGerman Verb Kusanganiswa. Maito muchiGerman; Iwo akapatsanurwa mumapoka senge zviito zvenguva dzose, zviito zvisina kujairika, zviito zvinoparadzaniswa, uye zviito zvisina kupatsanurwa.
Sezvo maitiro echiito ane mitemo chaiyo, zviri nyore kudzidza kudarika zviito zvisingawaniki, asi sezvo mazita asinganzwisisiki kazhinji asingatenderwi, zvisingaiti zvinyorwa zvisinganzwisisiki zvisingashandisi zvinofanira kunge zvichinyatsoyeukwa.
Muzvidzidzo zvedu zvekare, takapa ruzivo pamusoro pemutauro conjugation.
Iye zvino ngationei kupa ruzivo pamusoro pemutauro conjugation uye mutongo wakakodzera.
Muchiitiko ichi, tichaita mutsara:
(Kutorwa maererano nezvinoitika panguva ino)
Ich renne: Ndiri kumhanya
wir rennen: isu tiri kumhanya
sie rennt: iye ari kumhanya
Sie rennen: uri kumhanya
ihr rennt: iwe uri kumhanya
Musoro wemutsara haufanire kunge uri chirevo chemunhu. Chero hunhu hunogona zvakare kuve chinhu chemutongo.
Iye zvino ngatiitei mitsara ine nyaya dzakasiyana;
Izvozvi  Ndiri kutaura
ihr spricht  iwe utaure
Ali spricht  Ali anotaura
das Kind spricht  mwana anotaura
ein Kind spricht  mwana anotaura
kufa Kinder sprechen  vana vanotaura
der Lehrer spricht  mudzidzisi anotaura
die Lehrer vasarudze  vadzidzisi vanotaura
ein Lehrer spricht  mudzidzisi anotaura
Mutsara waonekwa pamusoro apa mutongo wakapfava unogona kugadzirwa munguva yazvino. Iwe unogona kuita mitsara yakasiyana siyana uchishandisa chero chiito uye chidzidzo chaunoda.
altan anodaro 4 zuva rapfuura